उडुसले दुःख दिएर बनेको नेपालकै पहिलो रक गीत ‘दिउँला यो जोवन’को पहिलो कथा यस्तो – " कञ्चनजंगा News "
उडुसले दुःख दिएर बनेको नेपालकै पहिलो रक गीत ‘दिउँला यो जोवन’को पहिलो कथा यस्तो
No Comments on उडुसले दुःख दिएर बनेको नेपालकै पहिलो रक गीत ‘दिउँला यो जोवन’को पहिलो कथा यस्तो
यो वि.सं. २०२० साल तिरको कुरा हो । ५६ वर्ष अघिको । वरिष्ठ गायक कुमार बस्नेतलाई पाटन गाबाहालका सुन्दर श्रेष्ठले कलकत्ता जाऔं भने । त्यस ताका कुमार बस्नेत आफ्नो गीत ‘ओइ ना ना’ का लागि चर्चित भइसकेका थिए । रेडियो नेपालले उनको गीत दिनमै चार पाँच पटक बजाइदिन्थ्यो ।
कुमार बस्नेत आफ्नो चारवटा गीत रेकर्ड गर्ने उद्देश्य लिएर सुन्दर श्रेष्ठसँग कलकत्ता हानिए । जे जति खर्च लाग्छ, त्यो सबै श्रेष्ठले नै व्यवहोर्ने गरी ।
त्यतिबेला नेपालमा भर्खर गितार भित्रन सुरु भएका थिए । तत्कालीन नेपाली संगीत क्षेत्रमा कुमार बस्नेतले मात्रै गितार बजाउँथे । कलकत्ता यात्राका बेला यी दुई एउटा होटलमा बसे । यसो के सुतेका थिए, उनलाई असहज महसुस भयो । आँखा खोलेर चारैतिर हेरे, जिउको चारैतिर देखे उडुस् नै उडुस् । आत्तिएर हत्तपत्त उठे । त्यसपछि उडुसलाई हातले सोरेर पानीमा फ्याँके । उक्त घटना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यसपछि सुत्नै सकिनँ, दिक्क लाग्यो । अनि एउटा मेचमा गएर ‘ट्याक्क’ बसेको थिएँ । हरे, उडुस नै उडुसको खानीमा गएको जस्तो भयो के।’
त्यसपछि उनी अलि पर गएर बसे । निद्रा त लागेन । सोचे, ‘अब भएन बा, एउटा गीत त गाउनै पर्‍यो’ । केही त गर्ने तर केही भिन्न गर्ने उनले सोच बनाए । संगीतका विभिन्न प्रकार बारे उनी जो जानकार थिए । ‘एउटा मात्रै गीत गरेर के गर्ने ? भिन्न किसिमको गर्छु भनेर सोचँे । दिमागमा विभिन्न किसिमका संगीत त आइरहेका थिए तर सोचेँ यसपटक चाहिँ रक एण्ड रोल हान्छु ।’
त्यतिबेला उनले विदेशी ब्यान्ड र संगीतकार जस्तै ब्याड बोन्स, जिमी हेनरिक्स, एल्भिस प्रेस्लेहरुको गीतहरु सुनेका थिए । ‘एउटा नेपाली पनि हानौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यहीँ बसेर सोच्न थालेँ । शब्द फुरिहाल्यो – ‘दिउँला यो जोवन तिमीलाई दिउँला, मायाले माया साटी लिउँला,’’ उनले भने ।
नेपालको पहिलो रक गीतः
उनले गीत त सुरु गरिहाले । त्यति नै बेला भी वल्सरा (आमा फिल्ममा संगीत दिएका) उसैको समूहमध्येको एकले गितारिस्ट खोजिदिए । ‘८ सय रुपैयाँ लिन्छ, के गर्ने सर ? भनेर जानकारी दिए । त्यसपछि उसलाई भेटेँ । उनले अभ्यास पनि गर्न पाएनन् । एकैछिनमा उसले गितारमा ट्याकटुक मिलायो ।’
गीतमा ड्रम पनि चाहिने महसुस गरे । त्यसकारण ड्रम पनि खोजे । त्यसका लागि एक हजार आइसी दिनुपर्ने भयो । ‘दुई सय ट्याक्सीमा र आठ सय बजाएको । ड्रमलाई पनि भाडामा लिएँ र बजाउन लगाएँ,’ उनले भने ।
चारवटा गीत रेकर्ड गर्न गएका उनी, ‘दिउँला’ बोलको गीत अन्तिममा रेकर्ड गर्नुपर्‍यो । ‘गीत गाउँदै गर्दा पाँच बज्यो, अफिस छुट्ने समय भयो त्यतिबेला रिभाइज गरेर गीत गाउनै दिएन मलाई । ‘ए, भयो–भयो ठिक छ ठिक छ भनेर सबैले प्याक गर्न थालिहाले,’’ उनले त्यतिबेला चित्त नबुझेको कुरा सुनाए ।
कुमार बस्नेत साथी सुन्दर श्रेष्ठसँग कलकत्ता गएका थिए, त्यहाँको खर्च सबै उनैले जोहो गरेका थिए त्यसैले यो गीतको शब्द सुन्दर श्रेष्ठको हो भनेर लेखिदिए ।
‘गीत रेकर्ड गरेर नेपाल फर्कियौँ । गीत उच्चतम अभ्यास गरेर गाएको भए पो राम्रो हुन्थ्यो । ड्याङ् ड्याङ र डुङ्डुङमा नै यत्तिकै गीत सिद्धाएर आयौँ, ’ उनले सम्झिए ।
‘त्यस ताका नारायण गोपालको ‘आँखाको भाका आँखैले’ बोलको गीत तबलामा ढुकुढुकु हानेर गाइएको थियो । ड्रम बजाएर लिड खेलेको गीत चाँही पहिलो त्यही नै थियो । नेपालको पहिलो रक गीत । यो धेरैलाई थाहा पनि छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।पछि यो गीत कुमार बस्नेतले बबी पन्तसँग मिलेर बजाउँदा अर्कै भएको र एकदम सुपरहिट भएको कुमार बताउँछन् ।
नाचघरमा प्रेम ध्वज नाइट नामक कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो । त्यतिबेला उनी पनि गएका थिए । त्यो दिनको घटनालाई उनी ‘उपद्रो’ को संज्ञा दिन्छन् । उनले भने, ‘दर्शकहरुले त्यही गीत फर्माइस गर्न थाले । एकपल्ट गाएँ, भएन । दुई पल्ट गाएँ, भएन । चार पल्ट गाउँदासमेत ‘वान्स मोर’ आयो । सबै दर्शक उभिएर हुटिङ गरिरहेका थिए ।’
उनलाई त आपत् पर्‍यो । चार पटकसम्म उनी निकै जोशिलो भएर नाची नाची गाए तर पाँचौं पल्ट थाकेर गाउनै सकेनन् जसका कारण नाचघरका सय बढी सिटहरु भाँच्चिए । ‘एउटा गीतले गर्दा हाम्रो नाचघरको सयवटा कुर्सी भाँच्चिन्छ भने, त्यसलाई किन दिने भनेर मलाई त्यस उप्रान्त त्यहाँ गाउन दिइएन ।’
र पछि उनलाई दर्शकहरुले पनि कुमार दाजुले गएको लोकगीत नै राम्रो भन्न थाले । त्यसपछि उनले ‘ह्वाइ नट टु’ लोकगीत भनेर लोकगीतमा बढी ध्यान दिए । गीत बीचमा नै हरायो ।
यसरी पुनः बज्न थाल्यो गीतः
‘पहिला पो कोही पनि थिएनन् पछि त नेपालमै पनि गितार बजाउने टन्नै भए । त्यसपछि जर्साब शुभ बहादुर सोनामले गोकर्णमा नाचेपछि फेरि चल्न थाल्यो त्यो गीत । पछि आएर पूर्व युवराज दिपेन्द्र शाहले पनि यो गीत निकै मन पराए,’ उनले भने, ‘तिम्रो बाउलाई सलाम छ, लैबरी लै, दिउँला, छोरीभन्दा आमा तरुनीलगायतका गीत फर्माइस गर्थे । युवराजले भनेपछि नगाउने कुरा पनि भएन । त्यहाँ पनि गाइयो । पछि भैरहवामा शिखर साँझ हुँदा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा कुमारले राम्रो गीत गाउँछ रे भनेपछि त्यहाँ पनि गाए ।’
त्यसपछि लोकगीतमा उनी व्यस्त हुन थाले तर साइडबाइ साइड केही आधुनिक गीत पनि उनले गाइरहे जस्तै ‘वर्षा के हो, ग्रिष्म के हो, दिन के हो, रात के हो, हजुरको माया मोहमा बाँचिरहुँ सधैं भरी, तिमीलाई रोजेको, मनले खोजेको’ जस्ता आधुनिक गीत उनले त्यतिबेला बेला गाउने गर्थे ।
← फुटबल सर्मथकको नारा : लिपुलेक हाम्रै हो, कालापानी हाम्रै हो → बसको ढोकामा उभिएर चुरोट खाँदा ख*सेर यात्रुको मृ*त्यु